Wariye Boston iyo maxaabiis kale oo laga sii daayay xabsiga Boosaaso. – Radio Daljir
Boosaaso, July 31- Waxaa goordhaway xabsiga weyn ee magaalada Bossaso laga siidaayey Wariye Faysal Max?ed Xasan ?Boston? oo maalmihii la soo dhaafay ku xirnaa xabsigaasi iyo 41 maxbuus oo kale. Siidaynta wariyaha ayaa timid ka dib kulamo muddo socday oo dhexmaray mas?uuliyiinta saxaafadda Puntland, ehelada wariyaha iyo dawladda Puntland kuwaas oo ku saabsanaa sidii wariyaha xoriyadiisa loogu soo celin lahaa.
Wariye Boston ayaa maqaal uu ku qoray bog internet Soomaali ah waxa uu ku sheegay in laba nin oo la soo dhigay waddada laamiga ah ee isu xirta Qardho iyo Boosaaso iyaga oo gowracan ay ka tirsanaayeen ciidamada daraawiishta Puntland waxaana xiray wariyaha 29-kii bishii June ee sanadkan.
Faysal Boston oo markii maanta la siidaayey la hadlay Radio Daljir ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu xoriyadiisa dib u helo uuna u mahadceliyo dhammaan dhinacyadii ka qaybqaatay sii dayntiisa iyo dawladda Puntlandba, waxaana uu sharaxaad ka bixiyey habkii loo xiray iyo sida xaaladdiisu ahayd intii uu xabsiga ku jiray.
Dhinaca kale waxaa maanta isla xabsiga Bossaso laga siidaayey in ka badan 40 maxbuus kuwaas oo qaarkood ay ku xukunaayeen xabsiyo sanado badan ah, loona haystay dambiyo isugu jira, amni darro, burcad-badeednimo, kufsi iyo tuuganimo.
Siidaynta maxaabiistaan ayaa ku timid cafis madaxweyne oo la xiriira munaasabadda 13 guurada ee ka soo wareegtay asaaskii Puntland oo ku beegan maalinta beri ah ee 1-da Aug. iyo soo dhawaynta bisha barakaysan ee Ramadaan sida uu sheegay taliyaha xabsigaasi Shire Siciid Max?ed.